बादी समुदायको जीवनशैली फेरिँदै
निशान न्युज जेष्ठ १, 2075
अछाम । साँफेबगर नगरपालिकामा बसोवास गर्दैआएका बादी समुदायको जीवनशैली फेरिँदै गएको छ ।
सुल्पा, मादललगायत सामग्री बनाएर गाउँ/गाउँ गएर बेचेर तथा नाचगान गरेर जीविकोपार्जन गर्दे आएका बादीले अहिले आफ्नो पेशा परिवर्तन गरेका छन् । साँफेबगर नगरपालिका–४ मष्टामाण्डौँको बूढीगंगा नदीको किनारमा बसोवास गर्दे आएका उनीहरुले अहिले व्यापार र कुखुरापालन गर्दैआएका छन् ।
वडाले बादीका दुई परिवारलाई आयआर्जनका लागि रु ५०/५० हजार सहयोग गरेको छ । मिठ्ठु बादीले पसल सञ्चालन गर्नुभएको छ भने शान्ता बादी कुखुरापालनका लागि खोर व्यवस्थापनमा लागेकी छन् । बादी समुदायले नाचेर, मागेर खानुपर्छ, अरु व्यवसाय गर्न हुन्न भन्ने सोचको अन्त्य गर्न आफूले खुद्रा व्यापार शुरु गरेको रमेश बादीले बताए ।
‘पहिलेको जस्तो मागेर खाने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘पहिलेको जस्तो बिक्री हुदैँन, जीवन धान्न व्यापार शुरु गरेको छु ।’ यस्तै शान्ता बादी कुखुरापालन गर्न खोर बनाउन थालेकी छन् । नगरपालिकाबाट सहयोग प्राप्त भएपछि उनी निकै खुशी छन् ।
शान्ताको श्रीमान् बित्नु भएको सात वर्ष भयो । ‘श्रीमान् हुँदा जेनतेन गुजारा हुन्थ्यो । उहाँ बितेपछि निकै समस्या भयो । पैसा नहुँदा केही गर्न सकिएन, अब मागेर खाने जमाना गयो,’ उनले भने, ‘खेतीपाती गर्नलाई जमिन छैन ।’
जीविकोपार्जन र आयआर्जनका लागि सहयोग उपलब्ध गराएको साँफेबगर नगरपालिका–४ का वडाअध्यक्ष बालगिरी कुँवरले बताए । बादी समुदायको जीवनस्तर उकास्न सहयोग गरेका हौँ’ उनले भने ।
बादी समुदायको दुई परिवार सॉफेबगर नगरपालिका–४ मष्टामाण्डौँमा बसोवास गर्दैआएको छ । सरकारको जनता आवासीय कार्यक्रम अन्तर्गत शहरी विकासले २ लाख २५ हजारमा घर निमार्ण गरेपछि उनीहरुलाई ठूलो राहत मिलेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा डुकाटी मोटरसाइकल गुडाउन प्रतिबन्ध
काठमााडैं - प्रहरीले उपत्यकाभित्र डुकाटी मोटरसाइकल गुडाउन रोक लगाएको छ । अत्याधिक ध्वनी प्रदूषण...
नमुना काम गरेर अब्बल बनेका स्थानीय तह
काठमाडौ‌ । यतिबेला सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा स्थानीय तहले लगाएको करको चर्चा भैरहेको छ । धेर...
आज कस्तो छ तपाईको भाग्य ? हेर्नुस् राशीफल
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) गृहिणीले मानसिक तनाव, व्यापारीले घाटा, विद्यार्थीले अना...
नुवाकोटमा बाढी र पहिरोले १० घर बगायो, लाखौंको क्षति
नुवाकोट । बाढीपहिरोले यहाँका विभिन्न स्थानमा १० घर बगाएको छ । घर बगाउँदा लाखौँको क्षति भएको छ । ...
दशैंसम्म मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा आउँछः सभामुख महरा
काठमाडौं । उपत्यकाको खानेपानी सञ्जालमा शनिबारदेखि दैनिक ३ करोड लिटर पानी थपिएको छ । सभामुख कृष्णब...
छैटौं मिस टिन कलेज तथा प्रथम कलेज हेन्डसमको अडिसन सम्पन्न
काठमाडौ । काठमाडौंमा मिस टिन कलेज र कलेज हेन्डसमको पहिलो अडिसन गरिएको छ । अडिसनमा काठमाडौंमा रहेर...
घुससहित भन्सारका कर्मचारी पक्राउ
कञ्चनपुर । प्रदेश नम्वर ७ को कञ्चनपुरमा रहेको गड्डाचौकी भन्सार कार्यालयका नायव सुब्बा राम प्रशाद ...
पशुपति आर्यघाटमा खुल्लमखुल्ला यौनको व्यापार, प्रशासन मौन
धनकुटामा शुरु भयो रेडियो भेडेटार
बाजेको सेकुवाको भक्तपुरमा करोडौंको जग्गा, किन पुगेन प्रशासनको आँखा ?
शिक्षकबाट विद्यार्थी बलात्कृत, गुपचुप राख्न ३० लाख नगद र दुई कठ्ठा घडेरीको प्रस्ताव
सिंहदरबारमै कालो पेटिकोटमा प्रदर्शन !
भूतसँगै प्रेम र सम्भोग ! भुतबच्चा जन्माउने युवतीको चाहना
मानिस खुशी हुन गर्नुपर्ने पाँच काम, दुःखी हुने पाँच कारण (अनिवार्य हेर्नुस्)